सहकारीले दोस्रो किस्ता बापतको कर कसरी गणना गर्ने ? (उदाहरण सहित) | Nepal's No.1 Co-operative News Portal
Home सहकारी खबर [Coop News] सहकारीले दोस्रो किस्ता बापतको कर कसरी गणना गर्ने ? (उदाहरण सहित)
सहकारीले दोस्रो किस्ता बापतको कर कसरी गणना गर्ने ?
सहकारी संस्थाहरुले विगतबाटै अग्रिम करको किस्ता माथि उल्लेख गरे बमोजिम बुझाउँदै आएका छन् । तर, हालसालै केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन मार्फत आयकर ऐनमा संसोधन गरी सहकारी संस्थालाई लाग्ने करको दर घटाईएकोले के कसरी किस्ता गणना गर्ने भन्ने द्विविधा रहेको पाईयो । सो द्विविधाको उदाहरण मार्फत निराकरण गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।
– यदि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित भएमा लाग्ने करको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुने ।
– यदि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित भएमा लाग्ने करको दरमा पचहत्तर प्रतिशत छुट हुने ।
उदाहरण १ः (यदि पहिलो किस्ता २० प्रतिशतका दरले कर लाग्ने मानी अग्रिम भुक्तानी गरिएको भएमा)
मानौ काठमाण्डौ महानगरपालिकामा सञ्चालित डाँफे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आ.व. २०७५।७६ मा कुल एक करोड रुपैया नाफा गर्ने अनुमान गरेको छ । यो अनुमान अहिलेको अवस्था विश्लेषण गरेर गर्नुपर्दछ । महानगरपालिकामा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भएकाले यस संस्थालाई नाफामा १० प्रतिशत कर लाग्ने भयो । यसरी हिसाव गर्दा सो संस्थाको आ.व. २०७५।७६ को कुल अनुमानित कर दायित्व रु. १० लाख भयो । संस्थाले बैंकमा रकम राख्दा प्राप्त गरेको व्याजमा हालसम्म बैंकले काटेर जम्मा गरेको रकम २ लाख रहेछ । त्यस्तै संस्थाले पौष मसान्तमा पहिलो किस्ता अग्रिम कर बापत भनि रु. ८ लाख रुपैया (१ करोडको २० प्रतिशतको ४० प्रतिशतले हुने रकम) जम्मा गरेको रहेछ । अव, संस्थाले चैत्र मसान्त सम्म जम्मा गर्नु कुल करको रकम रु. ७ लाख (१० लाखको ७० प्रतिशत) संस्थाले हालसम्म जम्मा गरेको रकम रु. १० लाख (२ लाख र ८ लाख) संस्थाले चैत्र मसान्त सम्म आवश्यकता भन्दा बढी रकम जम्मा गरीसकेकाले थप रकम जम्मा गर्नु नपर्ने । तर दोस्रो किस्ताको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पेश गरी प्रमाणित गराउनुपर्दछ ।
उदाहरण २ : (यदि पहिलो किस्ता १० प्रतिशतका दरले कर लाग्ने मानी अग्रिम भुक्तानी गरेमा)
मानौं काठमाण्डौ महानगरपालिकामा सञ्चालित डाँफे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आ.व. २०७५।७६ मा कुल एक करोड रुपैया नाफा गर्ने अनुमान गरेको छ । यो अनुमान अहिलेको अवस्था विश्लेषण गरेर गर्नुपर्दछ । महानगरपालिकामा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भएकाले यस संस्थालाई नाफामा १० प्रतिशत कर लाग्ने भयो । यसरी हिसाव गर्दा सो संस्थाको आ.व. २०७५।७६ को कुल अनुमानित कर दायित्व रु. १० लाख भयो ।
संस्थाले बैंकमा रकम राख्दा प्राप्त गरेको व्याजमा हालसम्म बैंकले व्याजदर काटेर जम्मा गरेको रकम २ लाख रहेछ । त्यस्तै संस्थाले पौष मसान्तमा पहिलो किस्ता कर बुझाउँदा अग्रिम कर बापत भनि मात्र रु. ३ लाख रुपैया मात्र जम्मा गरेको रहेछ ।
१. संस्थाले किस्ता रकम जम्मा नगरेमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमबाट जम्मा गरेको रकम घटाई बाँकी रकममा बार्षिक १५ प्रतिशतको दरले व्याज लाग्दछ ।
२. विवरण समेत हरेक पटक दाखिला गरी प्रमाणित गराउनुपर्दछ, सो नगरेमा समेत तोकिए बमोजिम जरिवाना लाग्दछ ।
नोटः यो सामग्री सहकारीको अग्रिम कर जम्मा गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि सहकारी बैंकले तयार गरी उपलब्ध गराएको हो ।